VIDEO: Qiimeyn 122-gool oo Messi, Suarez & Neymar dhaliyeen 2014/15, kee ugu qurxan. – Cayaaraha dunida
Saddexda gool dhaliye ee ka soo jeeda qaarada Latin America ee ka tirsan kooxda Barcelona ee Lionel Messi, Luis Suarez iyo Neymar Jr ayaa xili ciyaareedkan kubbada cagta aduunka heerka koox ahaan taariikh u dhigay kadib markii ay 122 gool kooxdooda Barcelona u dhaliyeen.Saddexdan gool dhaliye ayaa rekoodh ku dhigay inay noqdeen saddexdii gool dhaliye ee hal xili ciyaareed koox goolasha ugu badan udhaliyay.
MSN ayaa bilawgii xili ciyaareedka 2014/15 su’aalo layska waydiinayay, dadka qaar ayaa ku doodayay in Suarez uu ku ag muuq beeli doono Lionel Messi sidii hore ugu soo dhacday ciyaartoy kale halka dadka qaar saadaalinayeen inay noqon doonaan Messi, Suarez iyo Neymar weerar saddex xagal geeri ku noqon doona kooxaha ay Barcelona ka hor iman doonto.
Si kastaba wixii dhacay ayaa dhacay, saddexda ciyaartoyna waxa ay Barcelona ka caawiyeen inay saddexda koob ku guulaysato, waana arin aad uga fog qaabkii ay Barcelona ku dhamaysatay xili ciyaareedkii 2013/14 markaas oo ayna wax koob ah ku guulaysan.
Haddii aan joos ugu degno 122 ka gool sida ay Messi, Suarez iyo Neymar ukala dhaliyeen ayuu Messi dhaliyay 58 gool isaga oo goolasha rekoodho ku jabiyay isla markaana kuwo kale ku dhigay, Neymar oo xili ciyaareedkiisii labaad Barcelona ku qaatay ayaa dhaliyay 39 gool halka Luis Suarez oo xili ciyaareedkiisii ugu horeeyay Barcelona saddexda koob kula guulaystay uu dhaliyay 25 gool. Laakiin Suarez ayaa bilawgii horyaalka La ligaha ganaax ku seegay kadib markii ay FIFA ganaax afar bilood ah ku riday.Saddexda ciyaartoy ayaa sidoo kale 55 gool oo kale caawintooda lahaa.
Haddaba waxaanu halkan idiinku soo gudbinaynaa goolasha ay Messi, Suarez iyo Neymar taariikhda ku dhigeen laakiin goolasha xidigan ayaa si kali kali ah loo habeeyay. Halkan ka daawo muuqaalka 58 ka gool ee uu Messi xili cciyaareedkan dhaliyay oo ku baxay luuqada Ingiriisida.
Hakan hoose ka daawo muuqaalka 39 kii gool ee Uu Neymar Xili ciyaareedkan Barcelona uga dhaliyay tartamada oo dhan.Neymar ayaa xili ciyaareedkan aad uga faa’iidaystay gool caawinta Messi iyo Suarez oo goolasha ugu badan ka
Inkasta oo uu Suarez isagu ganaax ku seegay kulamo badan oo bilawgii xili ciyaareedkan ahaa isla markaana uu bilawgii ku dhibtooday qaab ciyaareedka Barcelona ayuu markii danbe noqday xidig halistiisa iyo saamayntiisa la soo baxay. halkan ka daawo muuqaalka 25 kii gool ee uu Suarez xili ciyaareedkan Barcelona udhaliyay.
Haddaba akhriste marka aad daawatay dhamaan 122 ka gool ee ay Messi, Suarez iyo Neymar xili ciyaareedkan dhaliyeen, gool kee ayaad odhan kartaa waa goolkii ugu quruxda badnaa? Goolka aad u doorata yinuu yahay goolka ugu quruxda badani ma filaysaa inuu u tartami doono goolka xili ciyaareedka ee La Ligaha? ¨